Sakafo an-dalambe folo malaza indrindra any India - India Tourist Visa Food Guide
Ho an'ireo tia sakafo, ny sakafo dia mihoatra noho ny sakafo in-3 isan'andro. Mijery ny palette sakafony amin'ny fomba rehetra azo atao izy ireo ary manandrana ny zavatra laniny. Raha mitovy fitiavana amin'ny sakafo an-dalambe ianao, dia azo antoka fa hanome fahafaham-po ny sakafo andrasanao ny sakafo an-dalambe any India. Any amin'ny vazan-tany rehetra any India dia hahita sakafo iray mahaliana izay tsy mbola nandramanao hatrizay ianao. Amin'ny maha-firenena maha-samihafa azy, manana zavatra manokana atolotra ny faritra rehetra ao India, manomboka amin'ny pani puri matsiro ao Delhi ka hatrany amin'ny puchka any Kolkata ka hatrany Mumbai vada pav. Ny tanàna tsirairay dia manana kojakoja fampiasa amin'ny kolontsainy.
Na dia tsy azo atao aza ny mikaroka sy manandrana ireo sakafo matsiro eny an-dalambe rehetra izay tsy maintsy atolotry ny firenena, dia azo antoka fa azonao atao ny misafidy sy misafidy ny tsara indrindra amin'ny ampahany, ary hanampy anao amin'ity dingana ity dia nokarakarainay ity bilaogy ity. indrindra ho anao. Nifidy tamim-pitandremana ireo sakafo malaza sy tiana indrindra avy amin'ny faritra rehetra amin'ny firenena izahay ary voalaza ao amin'ny lahatsoratra etsy ambany. Amin'izany fomba izany dia tsy mila mandany fotoana amin'ny fisavoritahana ianao amin'ny hoe inona no andramana ary inona no tsy tokony hatao. Ny lisitra dia manome antoka fa ny karazana tsiro sy tsiro rehetra dia tafiditra ao amin'ny olona miresaka an'io lisitra io, manomboka amin'ny zavatra masiaka ka hatramin'ny jalebis tena mamy sy matsiro! Nokarakarainay ny tsiron'ny tester rehetra. Jereo ireo sakafo voalaza etsy ambany ary jereo raha afaka mahazo azy ireo ianao. Mazotoa homana!
Ny iray amin'ireo sakafo an-dalambe mahazatra indrindra izay ho hitanao saika any amin'ny tanàna rehetra any India, dia Panipuri sa tokony holazaiko hoe Puchka? Sa aleo ataoko hoe Gol Gappe na Gupchup na Pani ke Patakhe? Eny, tsy adala ve izany fa misy anarana dimy samy hafa ny sakafo iray! Izany dia satria ny sakafo dia hita saika isaky ny tanàna any India ary nahazo anarana araka ny voambolana. Ny hanim-py dia voaomana miaraka amin'ny ovy nopotsehina, asiana zava-manitra isan-karazany avy eo dia fenoina ao anaty rafitra miendrika baolina matevina. Izy io koa dia feno rano masiaka sy marikivy mba hanomezana azy ny hitsiny marina. Raha sendra any India ianao dia tokony handeha tanteraka hihinana an'ity sakafo mahazatra sy tena tianao ity.
Jereo ny Eligibility e-Visa India.
Ny Aalu Chat dia sakafo mahazatra any India Avaratra indray hita indrindra any amin'ny faritra West Bengal, Bihar ary Delhi. Io no iray amin'ireo sakafo an-dalambe azo atolotra indrindra azonao andramana rehefa any avaratr'i India ianao. Ny sakafo dia voaomana amin'ny ovy, karazana zava-manitra isan-karazany, ravina voanio, indraindray tongolo sy voatabia ary miankina amin'ny faritra misy zavatra na ny iray hafa no manampy na esorina aminy. Amin’ny ankapobeny dia somary masiaka sy marikivy ny tsirony, ny mpivarotra sasany aza manao azy ho mamy rehefa mangataka amin’ny asiana ranom-boasary makirana. Ity sakafo an-dalambe ity koa dia fahita any amin'ny firenena Pakistan sy Bangladesh. Amin'ny manaraka hitsidika an'i India Avaratra ianao dia ataovy izay hahazoanao ny tananao amin'ny Chat Aalu. Tsy sarotra ny mahita azy ary tena mora am-paosy ihany koa.
Laharana fandraisana na rohy Fanohanana ny mpanjifa e-Visa India ho an'ny fangatahana rehetra.
Na dia asaina manandrana ny Chole Bhature tsara indrindra ao amin'ny firenena aza ny faritr'i Punjab, na izany aza, rehefa nandroso tamin'ny fanandramana tamin'ny sakafo sy ny fianarana ary ny fahazoana kolontsaina vaovao izahay, ny I India Avaratra izao dia manolotra Chole Bhature eo amin'ny takelakao. Ny akoho amam-borona no tena nanaovana azy ary ny paratha dia voaomana amin'ny koba mahazatra. Ny hanim-py dia malaza any avaratr'i India, ary asaina indrindra rehefa noana be ianao ary maniry zavatra mameno, tsy dia masiaka loatra ary mifangaro tsara amin'ny mamy sy marikivy. isan-karazany ny zava-manitra ary indraindray curd koa alohan`ny hanompoana sy sakafo an-dalambe tena mora azo manerana an'i Delhi sy Kolkata manontolo. Raha tokony ho antsoina hoe sakafo an-dalambe fotsiny ianao, dia azonao atao ny miantso azy io ho sakafonao mandritra ny andro. Ny fatran'ny sakafo dia ampy ho an'ny sakafo feno. Aza adino ny Chole Bhature any India raha eto ianao!
Raha sendra mankany amin'ny tanànan'i Mumbai ianao, dia ho hitanao fa ny antsasaky ny vahoaka ao Mumbai dia miankina amin'ny Vada Pav tena matsiro ho an'ny sakafo hariva. Ny sasany aza aleony ny sakafo an-dalambe ho an'ny sakafo maraina na antoandro. Ny Vada Pav dia matetika vita amin'ny ovy voatoto sy mofo. Ny sakafo dia aseho amin'ny fomba toy izany miaraka amin'ny zava-manitra fanampiny rehetra sy ny tanana havanana mba hanomanana ny vokatra tonga lafatra izay tsy azon'ny olona mihinana azy mandà ny fahambonian'ny sakafo an-dalambe noho ny hafa. Izy io koa dia iray amin'ireo sakafo an-dalambe mora indrindra ho hitanao. Na dia hita any amin'ny faritra avaratr'i India manontolo aza izao ity sakafo an-dalambe ity, ny tena maha izy azy dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny fanjakan'i Maharashtra izay misy ny fakany.
Saika amin’ny lafiny rehetra amin’ny tanàna amin’ny takariva, dia hahita mpiandry trano fisakafoanana manomana ny sakafo sy olona mivory eo amin’ny saretin’ny mpivarotra. Ity sakafo ity dia zavatra tsy azonao adinoina!
Jereo ny Urgent India e-Visa (India Visa Online).
Ghugni dia sakafo an-dalambe iray hafa mahazatra manerana an'i India Avaratra. Hanim-py tena tsotra izy io ary ny fomba fanolorana azy amin'ny mpihinana no mahatonga azy ho matsiro. Ny lovia dia voaomana voalohany amin'ny chickpea fa ny tsiro dia mivoatra amin'ny alàlan'ny zava-manitra sy ny akora ampiasaina amin'ny fandravahana ny sakafo an-dalambe. Ny ghugni nanompo teny an-dalamben'i Kolkata dia tena asaina, Na izany aza, azonao atao ny mijery an'io sakafo io any amin'ny faritra avaratra-atsinanan'i India. Tsara am-paosy ihany koa izy io ary masiaka ny ankamaroany, na izany aza, ny mpivarotra sasany dia manamboatra azy amin'ny ranom-boankazo izay mahatonga azy ho masiaka sy marikivy.
Io no iray amin'ireo matsiro indrindra ary ny ankamaroan'ny sakafo an-dalambe maneno amin'ny rehetra. Toeram-pisakafoanana any North India ny Rolls ary misy karazana horonana isan-karazany azonao atao, manomboka amin'ny veg roll izay nanaovana ny paratha tamin'ny koba mahazatra ary feno kôkômbra, tongolo ary zava-manitra sy saosy maro. Indraindray dia asiana ovy nopotsehina sy fromazy nopotehina koa. Avy eo dia misy akoho amam-borona sy atody miaraka amin'ny famenoana saika mitovy, ny ovy nopotehina fotsiny dia soloina akoho voatetika sy atody. Mba hahatonga ny sakafo eny an-dalambe ho matsiro kokoa, ny mpivarotra indraindray dia manisy fromazy sy dibera voatetika ao anaty famonosana mba tsy hohadinoinao ny hanim-py nanananao. Ity sakafo sakafo ity dia manapaka ho laharam-pahamehana.
Raha sendra mitsidika any amin'ireo fanjakana Indiana avaratra ianao, dia ny tanànan'i Delhi sy Kolkata no manolotra ny horonana tsara indrindra hatramin'izao. Sakafo matsiro tsy azonao adino fotsiny. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hanana an'io sakafo an-dalambe io ho sakafo antoandronao satria tena mahafa-po.
Pav Bhaji no mpanjakavavin'ny sakafo an-dalambe rehetra raha mihaino anay ianao. Izy no matsiro indrindra amin'ireo ovy potipotika rehetra ho azonao mandritra ny androm-piainanao. Ny teny 'pav' midika hoe mofo ary voaomana amin'ny koba mahazatra. 'Bhaji' izay midika fa ny karaoty dia voaomana amin'ny ovy masaka mifangaro amin'ny akora isan-karazany izay endasina amin'ny dibera avy eo. Ny sakafo an-dalambe dia malaza manerana an'i India, maivana be amin'ny fanjifana ary iray amin'ireo mora indrindra amin'ny be indrindra. Hahita làlana any amin'ireo tanànan'ny India Avaratra ianao izay mifamatotra amin'ny fivarotana mpivarotra Pav Bhaji. Io no iray amin'ireo sakafo maraina mahazatra indrindra ho an'ny mponina ao an-tanàna. Ny olona aza dia manomana an'io sakafo io ao an-trano satria ny fomba fahandro dia tsotra sy mora tanterahina. Raha te hanana ny Pav Bhaji tsara indrindra any India ianao, dia tokony handeha mivantana any Delhi. Ny tanàna dia mivarotra ny iray amin'ireo Pav Bhajis matsiro indrindra ho azonao any India.
Ity hanim-py ity dia natao manokana ho an'ireo izay manana nify mamy ary tsy mahatohitra ny antson'ny zavatra mamy sy mahandro. Jalebi dia sakafo mamy izay atolotra saika na aiza na aiza any India, azonao atao koa ny milaza azy ho tsindrin-tsakafo satria aleon'ny sasany mihinana azy aorian'ny sakafo tsara. Izy io dia lovia mamy miendrika spiral izay voaomana amin'ny menaka mahamay, ny mpahandro amin'ny ankapobeny dia mameno ny koba amin'ny lamba ary amin'ny alalan'ny lavaka kely eo amin'ny lamba dia apetany ao anaty menaka mangotraka manao endrika amin'ny alàlan'ny fandatsahana. Tena mahaliana ny mijery ary ny lovia dia zavatra an-danitra. Tsara kokoa raha manana jalebi ianao mandritra ny fotoam-pandraisana azy mafana ary raha vao maka ny tsirony ianao dia tsy afaka hijanona iray.
Mora hita ny mpanao Jalebi ary tsy lafo akory ny sakafo. Ity sakafo eny an-dalambe manokana ity dia tena atolotra ho an'ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra ary ho an'ireo izay tsy mandefitra amin'ny sakafo matsiro na marikivy dia afaka manandrana ity majika mamy ity.
Jereo ny Fizotry ny fangatahana e-Visa India.
Ity sakafo an-dalambe ity dia tena mahazatra-manala ny sakafo amin'ny araben'i Bihar sy Jharkhand, izay koa no niandohan'ny Litti Chokha. Ny Litti dia voaomana amin'ny koba mahazatra ary ny chokha dia vita amin'ny ovy voatoto, sakay ary zava-manitra maro hafa. Ny Litti dia nendasina raha ny Chokha dia voaomana amin'ny menaka kely. Litti Chokha ihany koa no mahaforona ny foto-tsakafon'ny mponina ao Bihar, raha sendra mitsidika ny fanjakan'i Bihar ianao dia tokony hanandrana an'i Litti Chokha ho sakafo maraina.
Ny Akki roti dia sakafo an-dalambe Indiana Atsimo malaza saika hita eny rehetra eny any atsimon'i India. Fototry ny Indianina Tatsimo ilay lovia ary mahandro sakafo maraina tsy tapaka ho an'ny maro. Ny teny 'Aky' dia midika hoe roti na mofo fisaka. Ny roti dia karakaraina amin'ny fampifangaroana lafarinina varimbazaha amin'ny karazana legioma samihafa (araka ny safidinao). Azonao atao ny misafidy ny hanome torolalana ny mpahandro amin'izay tokony ho ampiana na hanesorana amin'ny koba. Rehefa voaomana dia hanina ny Akki Roti na miaraka amin'ny kôkômbra na karazana chatni manokana izay omanin'ny mpahandro. Ity sakafo an-dalambe ity dia tsy hita afa-tsy any amin'ny faritra atsimon'i India, raha sendra mitsidika ilay toerana ianao dia andramo ny Akki roti satria mahasalama ihany koa ny vatanao ary tena matsiro ho an'ny lelanao.